2D kana 3D Machine Vision Sei Kwete Zvese | V-Uyezve
2D kana 3D Machine Vision? Nei Kwete Vaviri?
Yakanga isiri makore akawandisa apfuura kuti masisitimu dhizaini uye vanobatanidza vaizoita chero zvavaigona kudzivirira 3D muchina wekuona. Izvo zvaida masisitimu akaomarara emagetsi, yakawanda yekugadzirisa simba, huinjiniya hwakawanda, uye kunyange yakawanda mari.
Nhasi, pamwe nekuwedzera kwesimba remakomputa uye nyowani, inokurumidza CMOS kamera maseru, 3D muchina wekuona michina uye software vashambadzi vakarerutsa 3D sisitimu yekumisikidza vachiwedzera zvakanyanya kugona kune zvigadzirwa zvavo, sekushandisa ese maviri 2D uye 3D mifananidzo kugadzira avo masisitimu kunyange zvakanyanya kusimba. Nekuda kweizvozvo, kunyorera izvo zvaisazombofunga nezve mutengo we3D zviri kutora tekinoroji pamitengo yemarekodhi.
Chero hurukuro yekufungidzira ye3D inotanga nedudziro yemashoko. Iyo yakajairwa 2D muchina wekuona mufananidzo wakatsetseka, wakaenzana kubvumidza kuyerwa kwehurefu nehupamhi, asi haina kupa chero hurefu hweruzivo. Nhanho inotevera, 2.5D, inosanganisira Z axis kana kukwirira ruzivo kuwedzera kune X uye Y axes; inopawo ruzivo rwunobvumira iyo muchina yekuona system yekufungidzira zvinhu 'kutenderera (pini uye yaw) kutenderedza maviri eaya matatu mativi. Yechokwadi 3D inopa X, Y, uye Z ruzivo pamwe neruzivo rwekutenderera kutenderedza ese matatu matemo (rX, rY, uye rZ). Kune iyo "tsvene grail" ye 3D chiratidzo - bin kunhonga - uye zvimwe zvakawanda zvinobuda kunyorera, chete 3D ichaita.
"Kuona kwe3D uye kutora bhini kwerobhoti kwakasungirirwa zvakasimba pamwechete," anotsanangura Jim Anderson, Chigadzirwa Manager - Vision paSICK, Inc. (Minneapolis, Minnesota). "Vaoni vakaita saAdil Shafi vakashanda pane izvi kwemakore gumi nemashanu, asi ikozvino, kunhonga bin kuri kutanga kubereka michero."
Makambani akaita SICK ari kurerutsa kuendesa kwemuchina chiratidzo chakanyanya kuomesa mashandiro nekushandisa computational bhiza simba uye rakangwara software. Semuenzaniso, SICK inopa inogadzirwa bin-yekunhonga system inozivikanwa senzvimbo chaiyo yezvikamu mumabhini (PLB) iyo vakaroora laser triangulation-based muchina chiratidzo system ine yakasarudzika software iyo inotora zvese zvinofunga zvekunze kune account yekubudirira bin-kunhonga application .
Zvirinani 3D Software
"Nhoroondo, ese 3D software yaive yakavakirwa pa2D algorithms akaiswa mukushandisa kwe3D," anodaro Nicholas Tebeau, Manager Vision Solutions Chigadzirwa Boka kuLeONI Injiniya Zvigadzirwa & Services (Lake Orion, Michigan). “Ikozvino, makambani ari kupa maturusi akakodzera e3D anoita kuti basa rese rive nyore. Uye hausi chete mubvunzo we2D kana 3D. Nekunhonga bin, semuenzaniso, iwe unofanirwa kuve uine chaiyo grippers. Iyo software inofanirwa kuverengera iyo inobata uye ive shuwa kuti haibonderane nemabhini madziro - uye kwete kungo tsvaga zvikamu zvezvikamu, asi kuti uzive kwaunogona kuibata uye kwausingakwanise kubva pachikamu chejiyometri. Neraki, tinogona kushandisa FPGAs uye zvimwe zvishandiso kuita kuti chirongwa ichi chikurumidze, asi pachine zvakawanda zvekutarisa kubva pakuona kwekubatanidza. ”
Haasi ese marobhoti ekutungamira kunyorera anoda izere 3D. Sekureva kwaEd Roney, National Account Manager uye nyanzvi yekuona michina kuFANUC America Corp. (Rochester Hills, Michigan), “nguva zhinji robhoti yose inoda kuziva idaro rechinhu kubva pamaonero erobhoti. Mune izvo zviitiko, 2.5D inogona kushanda zvakanaka. Asi kana chikamu chacho chisiri panzvimbo yakati sandara, kana kukura kwechikamu chacho kusingazivikanwe, gore re3D ndiyo nzira yekuenda nayo. Asi kunyangwe kana chinhu chiri panzvimbo yakati sandara, semabhokisi pane pallet, kushomeka kwekusiyanisa kunogona kuve chikonzero chekuenda 3D. Robhoti inoshandisa 2D kana 2.5D inogona kutadza kuziva nyore nyore kuti bhokisi rimwe rinogumira riini uye rimwe rinotangira nekuti hapana musiyano wakakwana pakati pemabhokisi maviri aya. ”
Chiedza chakarongedzwa imwe nzira iyo makambani akaita SICK uye Tordivel AS (Oslo, Norway) inogadzira musiyano mumifananidzo ye3D. Tordivel, inonyanya kuzivikanwa neayo Scorpion Vision muchina wekuona raibhurari, ichangoburitsa iyo Scorpion 3D Stinger Kamera. Kusiyana nemakamera mazhinji eredhiyo, ayo anogadzira Z kukosha kweiyo pikisi yega yega zvichienderana nekusiyana kudiki mumifananidzo yakawanikwa nemakamera maviri akapatsanurwa akavakirwa mune imwe imba uye akapatsanurwa nedaro rinozivikanwa, Tordivel inosanganisa stereovision ne laser fungidziro.
"Iyo yakasarudzika pateni purojekita (RPP) inovimbisa kuti chinhu chichava nemucheka wakaringana weiyo robust stereovision kuverenga," anodaro Thor Vollset, CEO weTordivel. "Ndingataura kuti laser triangulation haina kushomeka kupfuura stereovision nekuti iyo 3D mapoinzi inogadzirwa zvichibva nekona iri pakati pekamera nelaser, muchokwadi kuverenga kwakareruka kwe2D. Iyo 3D calibrated kamera inoziva uko pixels dzese dzinofamba muchadenga. Izvi zvinoshandiswa kufamba pakati pemifananidzo ye2D uye 3D uchishandisa iyo 3D chinhu chinoburitsa kuti ubvise zvakanyatsojeka 3D zvinongedzo kubva kumakona akanyatsojeka mumifananidzo ye2D. Mune laser triangulation scanner, iyo micheto haigone kunyatsotsanangurwa nekuti akawanda mapikisheni anowanzodiwa kutsanangura iyo 3D poindi. Ndingati makore mazhinji epa3D ane ruzivo rwakanyanya kudarika mufananidzo we2D. ” [Cherekedza: Vanotsigira laser triangulation vanoti masystem avo anopa zviri nani resolution ye3D pane stereoscopic, asi pakupedzisira, zvinosvika pakumira-kure, kumhanya kwe laser scan, kugadzirisa kamera, uye zvimwe zvinhu.]
"Nedu Scorpion 3D Stinger Kamera uye shamwari software, isu tinogadzira dense 3D mapoinzi gore uye shamwari yepamusoro-resolution 2D mufananidzo wakaiswa," anowedzera Vollset. "Kutanga nemufananidzo we3D, unogona kumisa chinhu chinomira kana ndege yechinhu wozoenda kumufananidzo we2D uko kwatinoita zviyero zvakarurama zve3D. Makore maviri apfuura, ini handina kufunga kuti izvi zvaigoneka. Asi ikozvino, tinogona kubvisa nemamirimita mitauro yega yega mukati meiyo Euro pallet munda wekuona 800 mm x 1200 mm x 1000 m pasekondi. Kuti uite izvozvo ne laser scanning zvinogona kutora masekondi maviri kusvika mashanu, zvinoenderana nenguva ye laser scan. Imwe bhenefiti neiyo stereovision ndeyekuti tinokwanisa kutora 3D data kubva pazvinhu zvinofamba zvisina latency. ”
2D uye 3D: Zvakanakisa zveZvese Nyika
Nepo masisitimu e stereoscopic achigona kuburitsa mifananidzo yepamusoro-resolution 2D pamwe nemifananidzo ye3D yekuvandudza data kana kuita kuti sisitimu ive nyore kuti vanhu vashandise, kwete ese mashandisirwo ane chivakwa chekamera ye stereoscopic.
Kutenda kune yakakwira-inomhanya sensors CMOS, imwe kamera inogona kuunganidza zvese zviri zviviri-resolution 2D mifananidzo uye 3D data uchishandisa laser triangulation. "Kwete chete iwe unongogona kutora yakakwira-resolution grayscale kana kara yemufananidzo wega wega 1000th furemu, semuenzaniso, asi iwe unogona kuseta matunhu akasiyana mukati mekamera kamera yekuona uye unganidza ingave 3D kana 2D data kana ese ari maviri," anodaro SICK's Anderson.
Kugona senge izvi kuri kuunza vatengi vatsva ku 3D muchina chiratidzo. "Tine vatengi mune yekudyira-chikafu indasitiri vari kushandisa 3D kuyera 100% yechigadzirwa chavo sezvo ichipfuura pazasi pekamera pane inotakura," Anderson anodaro. "Kana iwe ukavimbisa 5-in. chokoreti bhawa uye iwe unongoburitsa 4.9-inch bar, ndiko kubiridzira. Saka unovaregerera pakati pe 5 ne 5.2 inches kuti uve nechokwadi chekuti wakachengeteka. Asi kana iwe uchikwanisa kuzvicheka izvo kusvika pa5.05 mukati., Iyo kambani inochengetedza mamirioni emadhora gore rega. Ndiwo mashandisiro akaita Ranger E yedu nyowani, iyo inopa yakajeka-yakajeka mifananidzo pamwe ne3D laser laser triangulation, yakagadzirirwa kugadzirisa. " SICK zvakare ichangoburitswa yakamira 3D chinhu chekuvheneka uchishandisa tekinoroji yakafanana neyemifananidzo-yakavakirwa 2D kodhi-yekuverenga scanner.
Sezvo mhinduro nyowani dzichiwanika dzinoita kuti zvive nyore kune vashandisi vatsva vekuona muchina kutora tekinoroji ye3D, vemukati vanotarisira kuti musika uenderere kuwedzera. "Kufungidzira kwakasiyana-siyana kuri kukura zvechokwadi," inodaro RAN yeFANUC. "Tinoona vatengi vazhinji vachikumbira nekuti 3D yave nyore kushandisa se2D muchina wekuona."
Post nguva: Nov-01-2019
Matipi - Hot Zvigadzirwa - Sitemap Telecentric Zoom Lens, Uv Dmd Lens, Yakagadziriswa-Focus Lens, Yakakura Fomati Yakakura Angle Lens, Bi-Telecentric Lens, Chinhu Chinonzi Telecentric Lens,